Tokkummaa Mootummootaatti, Waajjirri Dhimma Baqattootaa, UNHCR damee Keeniyaa, qorannoon rakkoo baqattoota Oromoo Mooyyalee keessa jiranii dafee akka xumuramuuf hojjettoota dabalataa achitti erguu beeksisee jira. Waajjirri dhimma Baqattootaa ka Keeniyaas gama isaatiin dhiyeenyatti tumsa barbaachisu gochuuf ajja qophaa’aa jiru dubbata.
Haala wal fakkaatuun barattoonni Mooyyaleedhaa baqatanii Keeniyaa jiran, har’a hiriira mormii gaggeessuun gochaa magaalaa Moyaalee keessatti ta’e balaaleffatanii jiru. Galgala kanammoo magaala Moyyaalee keessatti Eegdonni daangaa Konkolaataa tokkorratti dhukaasa banuu isaaniin, lubbuun daai’ma tokkoo darbuu jiraattonni VOA’f himanii jiru.
Ajjeechaa Sanbata darbee baqatanii ka Keeniyaa jiran Baqattoonni Oromoo daangaa Keeniyaa keessa bakka afur qubatanii jiru. Baqattoota kana waldaan fannoo diimaa ka damee Keeniyaa gaergaarsa malu isaaniif gochaa ka jiru yoo tahu, Gamtaa Mootummootaatti dhaabbati baqataa UNHCR damee keeniyaas akkaataa baqattootni kun itti gargaaraman qorachuurratti argama. Dubbi himaan UNHCR damee Keeniyaa Yiivoon Indeegee dhaabbati isaanii qorannoon baqattoota kana irratti jalqabame dafee akka xumuramuuf hojjettoota dabalataa garasitti erguuf akka jiru himani.
Mr.s Yiivoon dabaluunis namootni qe’eesaaniirraa buqqaafaman kun da’annaa akka argataniif UNHCR Mootummaa Keeniyaa waliin dubbataa jira jedhan. Ammas lakkoofsi baqattootaa ka dabalu yoo ta’e mootummaan keeniyaa bakka qubannaa akka isaaniif mijeessuu qabullee gaafatani.
Waajjirri Dhimma Baqattootaa ka Mootummaa Keeniyaa gama isaatiin waa’ee baqattoota kanaa hordofaa jiraachuu himeera. Gama biraan, jiruu harra barattoonni, baqatanii Keeniyaa jiran gocha dheengadda Mooyyaleetti raawwate mormuun Mooyyalee Keeniyaatti hiriira gaggeessaniiru. Hiriira kana gubbaatti barattoonni hedduun irratti ka argaman yoo tahu, badii lubbuu jiraattota magaalattiirra gaheef mootummaa ceepha’aniiru. Koomishina Mirga dhala-namaa Tokkummaa Mootummaatti, Koomishinarri itti-aantuun – Keet Gimoor, “haalli mirga namoomaa Eritiraa keessaa amma illee fooyyaa’ina argamsiise hin qabu” – jedhu. Hiriira kana irrattis qondaaltonni mootummaa naannoo sanii ka keeniyaa barattoota kana haasofsiisuu abdiin VOA’f himeera.
Galagala kanas sa’aatii 11 booda eegdonni daangaa Itiyoophiyaa konkolaataa tokko irratti dhukaasa bananii lubbuun daa’ima waggaa 8 tokkoo battalu ma ka darbe ta’uu jiraataan magaalattii tokko ammas dubbatan.